Ngoku ungaphula i-jailbreak i-iOS 8 okanye i-iOS 8.1 ngePangu8 | IPhone iindaba
El I-jailbreak ye-iOS 8 kunye ne-iOS 8.1 ngoku iyafumaneka enkosi kwiqela elingemva kwesixhobo sePangu. Ngeli thuba, le nkqubo ibizwa ngokuba yiPangu8 kwaye ngalo mzuzu ineentsilelo ezithile, ezinjengokuba ifumaneka kuphela kwiWindows kwaye ayifaki iCydia okanye iSmart Substrate ngenxa yokungangqinelani ne-iOS 8.
Ngenxa yoku kusikelwa umda, isenokungabi kukuqhekeka kwejele ongalindelanga. Njengoko kuchaziwe liqela le I-Pangu8Kukuqhekeka kwejele okujolise ngakumbi kubaphuhlisi, ke uCydia unokuziqhelanisa nazo zonke iinguqu ezenziwe ngu-Apple kwi-iOS 8 kwaye athintele iingxaki zokungangqinelani, into eyenzekayo kunye nomxholo omninzi ofumaneka ngeCydia.
Ngenxa yokuba iApple inokukhupha uhlaziyo kwi-iOS 8 eya kuthi ivale imingxunya yokhuseleko ethi iPangu8 isebenzise yona, kunokuba ngumbono olungileyo ukuba kuqhekezwe ijele ukusiphilisa empilweni. Nokuba asinayo i-Cydia, inokufakwa kamva ngesicelo sePangu, ngeSSH kunye nezinye iindlela ezifanayo.
Mna ngalo mzuzu Ndikucebisa ukuba ulinde iiyure ezimbalwa ngaphambi kokuqhekeza izixhobo zakho. Umzekelo, inguqulelo engu-1.0 yePangu8 kuye kwafuneka irhoxisiwe kuba ibangele ukucinywa kwazo zonke iifoto. Inguqulelo 1.0.1 yeyona inokukhutshelwa ngoku kwaye, kuyabonakala ukuba, kufuneka isebenze ngokuchanekileyo kodwa njengoko benditshilo, ngoku kufanelekile ukulinda iiyure ezimbalwa ukuze ube nezalathiso zabanye abasebenzisi.
Ukuqwalaselwa okumele kugcinwe engqondweni ngexesha le-8 ye-jailbreak:
Njengesiqhelo, ngaphambi kokwenza i-jailbreak kubalulekile yenza ugcino yedatha yethu ukuze kuthi, xa kukho impazamo, siyibuyisele kwaye sishiye isixhobo njengoko besinaso ngaphambili.
Kubalulekile ukukhubaza ikhowudi yokutshixa kunye cima umsebenzi "Fumana i-iPhone yam" okuphakathi koseto lwe-iCloud.
Ukuba oku kungasentla kwenziwe Inkqubo yokuqhekeka kwejele iyasilela kuthiEmva koko siya kuzama ezi zisombululo zilandelayo:
Inkqubo yokuqhekeka kwejele iyasilela-Faka isixhobo se-iOS kwimowudi yenqwelomoya kwaye uzame ukuqhekeza kwakhona. Ukuba oku akulungisi ingxaki, nceda uqalise kwakhona isixhobo sakho kwaye uzame kwakhona. Ukuba iyaqhubeka inika iimpazamo, kuya kufuneka usebenzise ukubuyisela umsebenzi obandakanyiwe ePangu8 kwaye wenze i-jailbreak.
"Inkqubo yokugcina phantse igcwele" umyalezoKungenxa yokuba ukwaphuka kwejele kuya kubhala uthotho lweefayile kulawulo lwenkqubo ye-iOS 8, ebangela ukuba lo myalezo uvele. Xa iCydia ifumaneka, ezo fayile ziya kutshintsha indlela yazo.
Ukuba uhlaziye i-iOS 8 nge-OTA, unokuba nengxaki yokufaka i-jailbreak. Kule meko, buyisela isixhobo usebenzisa umsebenzi wokubuyisela ofakwe kwiPangu8, eya kuthi iyenze isebenze ngokuzenzekelayo kwaye iyiphule.
Ukukhuphela - IPangu8 1.0.1 yeWindows
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Ngoku ungaphula i-jailbreak i-iOS 8 okanye i-iOS 8.1 ngePangu8
Iindaba ezimnandi zokulinda i-saurik ukuba ihlaziye i-cydia kunye nokwenza ukuba i-jailbreak yenziwe sele ilungiselelwe ukuba isebenze
Ukugqwesa, ekugqibeleni, ndingayithenga i-6 kunye
"Ngenxa yokuba iApple ingaphehlelela uhlaziyo kwi-iOS 8 engavala imingxunya yokhuseleko uPangu8 ayisebenzisayo, kunokuba ngumbono olungileyo ukuba kuqhekezwe ijele ukusiphilisa empilweni"
Undixelela ntoni ... ukuba kungcono wenze isiqingatha seJB ??? Ukuba iApple ikhupha uhlaziyo, ALUHLAZIYIWE kwaye yiyo loo nto ... kwaye xa i-JB izinzile iyafumana, loluphi olunye uhlobo lwengcebiso oyithandayo.
Ithetha ukuthini into yokuba ukuba iapile ikhuphe uhlaziyo olutsha oluvala imingxunya efunyenwe yipangu, awungekhe uphinde uphule ijele ukuba ubungakhange uyenze ngaphambili kuba ubungenakho ukubuyela kuhlobo lwangaphambili. Ukuba uyenzile ngaphambili kwaye awuyi kuhlaziya, njengoko isixhobo sele sine-jailbreak, unokufaka i-cydia nge-ssh umzekelo
Yhu, uxolo, Mnu.
Ngoku unokwenza ntoni nge-jailbreak ngaphandle kwe-cydia?
Ukuqhekeka kwejele ngaphandle kwe-cydia akunamsebenzi
UTony moncada sitsho
Sele ndinokuqhekeka kwejele, bendifuna ukuqinisekisa ukuba kulula ukuyifaka, ilula kunale yangaphambili ye-ios 7.1, kwaye njengoko ubusazi ukuba ayinayo i-cydia ke andinakwenza nto hahahaha, kodwa i-saurik inenceba kuthi Yonke into izohamba ngendlela ekufanele ukuba ibe ngayo, ndiyakwazisa nje ukuba yonke into iqhelekile. kodwa ayikuphuli ejele ukuba uhlaziye i-ota. Ndizamile kwaye ayizange.
Phendula uTony Moncada
Ndingayilanda phi i-iOS 8.1?
USaurik wacatshulwa esithi:
Ndinike ingxelo entsha yeCydia Installer ngohlobo lomgangatho oqhelekileyo wokuqhekeka kwejele ukuze ubandakanywe kuhlobo olutsha lwentolongo yabo. Ndityhale i-.deb yenguqulo ye-8 ye-Cydia ku-app.saurik.com yokukhuphela ngesandla, kodwa ingekabikho kwindawo endigcina kuyo. Ininzi imibulelo iyaphuma iye kwi-limneos, endivavanyele ukwakhiwa okutsha, njengoko bendikwisikhululo seenqwelomoya (kwaye ngoku ndicaphuka ndibhala lo myalezo ngelixa befumana indlela yokurhoxisa i-jetbridge kwindiza endikuyo leyo malunga suka uhambe).
Ukuyikhuphela kwaye uyifake ngesandla.
ukwazile ukufaka usebenzisa i-ssh ????? Ndihlala ndifumana impazamo. :(
Uyifaka njani i-cydia.deb usebenzisa i-ssh? Ingaba Ungandinceda Nceda? Ndiyabulela kwangoko
Ukuba nabani na unoluvo lokuba ungayifaka njani i-cydia ehlaziye i-saurik ukusikhokela kancinci kuthi abo balahlekileyo, nceda.
Enkosi kwaye Malunga !
Apha unokufakwa kweCydia ye-iOS 8 kunye ne-iOS 8.1
1- Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuqhekeka kwejele ukuze ube nokufikelela kweSSH kwisixhobo sethu.
2- Khuphela iphakheji yeCydia .deb.
3- Sifumana isixhobo sethu ngeSSH ngeFayilezilla, iWinSCP.
4- Siyakhumbula ukuba uyakufuna i-IP yesixhobo sakho (Useto / iWi-Fi / i ecaleni kwenethiwekhi) kwaye usebenzise umsebenzisi wengcambu kunye negama elinegama lokugqitha.
5- Silayisha ifayile yeCydia ekhutshelweyo kwindlela esiyikhumbulayo.
I-6- Usebenzisa iKhowudi / iTheminali sihamba kwindlela esiyisebenzisileyo nesiyibhalileyo: dpkg -i cydia_1.1.13_iphoneos-arm.deb
7- Siyiqala kwakhona isixhobo.
I-Cydia kufuneka ivele kwisixhobo sethu.
Ewe siyalumkisa ukuba okwangoku akusayi kubakho zilungiso okanye uhlengahlengiso olungasebenziyo nge-iOS 8, ke kungcono ukulinda de zihlaziywe kwaye ziyahambelana nale nguqulo ye-iOS.
Enkosi Mzalwana… !! Kodwa umzekelo ungandinika ikhowudi okanye ubhale ikhowudi ukuba ndibeka i-cydia kwindlela / var / mobile / ngekhodi endinokuhamba ngayo kwaye ndifake i-cydia kwindlela. Ndiyathemba ukuba uyandinceda. Ndiyabulela kwangoko
UEnrique Jose sitsho
Ndifumana le mpazamo xa ndiyifaka!
I-iPhone-de-Enri: / yabucala / var / ingcambu yeselfowuni # dpkg -i cydia_1.1.13_iphoneos-arm.de
dpkg: ukulungisa impazamo cydia_1.1.13_iphoneos-arm.deb (-install):
awunakufikelela kugcino: Akukho fayile okanye umkhombandlela unjalo
Phendula u-Enrique Jose
Nalu uqeqesho lobhuti ..
Ndiyathemba ukuba ndikuncedile. ngokubhekisele
Ukufaka i-cydia enter / var / mobile /, Yenza ifolda ebizwa ngokuba yiCydia eneemvume ezingama-7777, ngaphakathi kweCydia ivelise enye ifowuni yokufaka ngokuzenzekelayo kunye neemvume ezingama-777 ezishiya / var / mobile / Cydia / Autoinstall apho, gcina ufakelo lwefayile .deb oyikhuphele apha http://apt.saurik.com/debs/cydia_1.1.13_iphoneos-arm.deb , qala kabusha ifowuni kwaye ulungele i-Cydia efakwe. XD
Sebenzisa i-WinSCP, idevice yakho kufuneka ibe kwinethiwekhi ye-WiFi efanayo nekhompyuter yakho, fumana i-IP eyabelwe umzila kwi-idevice yakho kwaye uyifake kwi-WinSCP, umsebenzisi wengcambu, igama eligqithisiweyo elinegama eligqithisiweyo
Kulusizi ukuba ayikahlengahlengiswa iphone 6 kunye 6 kunye nescreen .. 🙁 .. ukulinda !!
UMario Cuevas Villar sitsho
Olé tus nos nos Nacho, le yiJB ijolise kubaPHUHLISI, hayi abasebenzisi abaqhelekileyo, kwaye uyibeka njengoko iJB sele ikho.
Phendula uMario Cuevas Villar
Ngaba uyifundile iposti? Ngaphezulu kwayo nantoni na kuba iziqendu ezibini zokuqala ndizinikezela ukucacisa ukuba zezabaphuhlisi. Andikwazi ukuyibeka ngokucacileyo.
JF Montoya sitsho
IJailbreak sele ifumaneka, kubaphuhlisi okanye kubasebenzisi abaphambili, njengoko ufuna ukuyibona, kodwa ezi ndaba zilungile. Enye into kukuba uninzi alwazi nokuba ungayisebenzisa njani, wonke umntu owenza le nto ayifunayo kodwa le bhlog ihlala isezantsi kwenkanunu ngeendaba zamva nje, andiqondi ukugxekwa okungaka ... Nabani na okwaziyo faka isicelo sokuqhekeka kwejele kufuneka usoloko uyenza phantsi koxanduva lwakho kwaye nabani na ongalindelanga nguqulelo "yabo bonke abaphulaphuli" ... Kwakhona, enkosi bafana ngokwabelana ZONKE iindaba.
Phendula JF Montoya
Umcimbi wexesha lokuya kwintolongo awuchazwanga kakuhle
I-Apple xa iplale imingxunya kufuneka ikhuphe uhlobo olutsha lwe-8.1.1. Ingxaki kukuba ikubamba ngo-7.1.2 ngaphandle kokuhlaziya, hayi ukuba ikubambe ngo-8.1 ngaphandle kokuqhekeka entolongweni
Yiza, into endiza kuyenza namhlanje kukuhlaziya i-iPad iye kwi-8.1 kwaye ulinde iJailbreak ukuba ivuthwe iintsuku ezimbalwa
I-Apple yenza into eyifunayo, ukuba uku-8.1 akuyi kubakho ngxaki
Oku kundikhumbuza ngefestile "yemoto yokhuseleko" abathi ngayo ngeF1 ngokungena kwebhokisi.
Ngoku lixesha lokungena ebhokisini kuba imoto yokhuseleko ishiya ilaphu elilandelayo
Phendula kwi- psy_pata
NCEDA!! Ndingayilanda phi i-iOS 8.1?
Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuh Ewe, ewe, Ouuuuuuuuuuuuuuu, isiphelo ikhukhamba, ukubulisa kunye neda de esileni!
Oko uNacho, enkosi ngenqaku lakho, kwiintsuku ezimbalwa i-JB iya kukhutshelwa abo bethu abangabaphuhlisi
UFrancisco Flores sitsho
Andikwazi ukukhuphela i-jeilbreak kwi-iPad yam 3 xa uyifaka m ithi ayinakuqhagamshela kwi-null k endinokuyenza
Phendula uFrancisco Flores
IPad yam ios8.1